Insitituyutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa saatii 24 darbeetti namoota 87’f qorannooCOVID-19 (vaayirasii koronaa) laabiratoriin taasisera.Kana keessaas namoonni 3 vaayirasii koronaan akka qabamanii jiran mirkana’era. – Rabira News
Insitituyutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa saatii 24 darbeetti namoota 87’f qorannooCOVID-19 (vaayirasii koronaa) laabiratoriin taasisera.
Kana keessaas namoonni 3 vaayirasii koronaan akka qabamanii jiran mirkana’era.
Haaluma kanaan haga ammaatti Itoophiyaatti namoota sadan amma vaayirasichaan qabamuun mirkana’e dabalatee kanneen vaayirasii koronaan qabaman 19 gahaniru.
Namoonni sadan amma haaraa vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkana’e:-
Dubartii waggaa 26 kan lammummaan ishee Itoophiyaa ta’eefi jiratuu magaalaa Finfinneeti.
Isheenis gafa Bitootessa 8 ,2012 Beelji’eem magaalaa Biraasil akkasumas Bitootessa 10,2012 immoo gara biyya Kaameruun deemtetti.
Dubartiin vaayirasii kanaan qabamtee argamte kunis mallattoon dhukkubichaa waan irratti mul’ateef Insitituyuti fayya
hawaasaa Itoophiyaatti waan beeksifteef qorannaan godhemifii vaayirasichaan qabamuun ishee mirkana’e .
Warri vaayirachan qaban haaraan lamaan hafan immo maatii tokko kan ta’an nama 14 fi 48 jiratoota magaalaa adaamaati.
Namoonni kun kanaan dura namoota vaayirasii koronaan qabame waliin walitti dhufeenya waan qabaniif bakka adda baasaanii qorataman keessa turani.